पतिले छोडेपछि सडकमा झाडू लगाउँथिन् आशा, सरकारी अधिकृतमा नाम निस्किएपछि सबै छक्क ! – Online Khabar 24
कडा मेहनत, समर्पण र आत्मविश्वास ।
यी केही शब्द मात्र होइनन् । त्यहाँ व्यवहार र जीवन बिताउने तरिकाहरु छन् । यो सकारात्मक दृष्टिकोणसँग भारत राजस्थानको एक नगरपालिकाकी कुचिकारको गहिरो नाता छ ।
हामी सबै यस्तो समाचार पढेर छक्क छौं । यो हुन्छ किनकि एक समाज को रूप मा, हामी रिक्शा, जुत्ता बिक्रेता, ढाबा चालक आदि लाई सम्मान संग हेर्दैनौं । हामी सोच्छौं कि मजदुर वर्ग र उनीहरुका बच्चाहरु के जीवन मा ठूलो पद हासिल गर्न सक्षम हुनेछन्?
तर आशा कंडाराले भने जस्तै जो कडा मेहनत गर्दछ, सफलता उसको खु ट्टा चु म्ब न गर्दछ । आशा भन्छिन् कडा परिश्रम गरे जस्तो चुनौति पनि पार लगाउन सकिन्छ । जोधपुरकी निवासी आशा कंडाराले २०१८ मा राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस परिक्षामा उपस्थित हुने मौका पाइन, जसको नतिजा अहिले आइसकेको छ।
र यो परीक्षा पास गरे पछि, उनी अब एक सरकारी अधिकारी बनेकी छिन् । प्रशिक्षण पछि, उहाँ सरकारी अधिकृत पदमा पोस्ट गरिनेछ।
तर यो बाटो आशा को लागी त्यति सजिलो थिएन। आठ बर्ष पहिले आशा को पति संग झ ग डा भएको थियो । पतिले उनलाई छोडेर गए, अब दुई सन्तान हुर्काउने जिम्मेवारी पनि उनीमाथि आयो । उनले जीविकोपार्जनको लागी केहि गर्नुपर्यो ।
तसर्थ आशा एक पछि अर्को गरी सरकारी जागिर को फर्म भर्दै रहिन्। उनले भनिन्, मैले वर्ष २०१७ मा तयारी सुरु गरें । सर्वप्रथम परिक्षाको तयारी सुरु भयो। तब सोचे कि यदि म केहि गर्न चाहन्छु, तब मैले यो ठूलो गर्नु पर्छ। यस पछि आरएएस को लागी तयारी शुरू भयो । तब सबै सरकारी जागिरहरु आए, सबै फाराम भरे ।
किनकि तपाइँलाई जीवन बिताउन आर्थिक सहयोग चाहिन्छ । २०१८ को जून मा, उनले मुख्य परीक्षा दिइन् । जुलाई मा, उनले जोधपुर नगर निगम मा एक सफाई कर्मचारी को रूप मा एक नौकरी पाइन् । तर, यहाँ पनि उनी स्थायी थिइनन् ।
यस्तो अवस्थामा, उनी स्थायी नियुक्ति को लागी लागेकी थिइन्। जुलाई १, २०२१ मा आशा जोधपुर नगरपालिकामा स्थायी बनाइयो । जे होस्, १२ दिन पछि अर्थात् जुलाई १३ मा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा २०१८को नतीजा आयो। जसमा आशा एक राम्रो श्रेणी संग सफलता हासिल गरिन् ।
राजस्थान प्रशासनिक सेवा मा केटीहरु सफलता को अर्को खबर बाहिर आएको छ । हनुमानगढ राजस्थानको एउटा जिल्ला हो। यहाँ एउटा सानो गाउँ छ । नाम भैरसारी हो । भैरौसारीका तीन जना केटीहरु राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास गरेका छन्
यी तीन केटीहरु साख्खै दिदी बहिनी हुन् । भारत टुडे संग सम्बन्धित कपिल शर्मा को रिपोर्ट के अनुसार, यी तीन केटीहरुको नाम रितु, अंशु र सुमन हो । तीनै जना एक किसान परिवारका हुन् र तीनै जना पाँचौ कक्षा पछि कहिल्यै स्कूल गएनन् । न त उसको गाउँमा पढाईको लागी स्कुल थियो, न त उसको बुबा सहदेवसँग पैसा थियो ।
यी तीन दिदीबहिनी एक अर्कालाई सहयोग गरेर पढे। स्कूल पछि कलेज पास गरे र सरकारी नोकरीको तयारी गरे । यो साभार गरियको खबर ।
Prevसाझको फ्लाइटमा अमेरिका जान तयार भएकी अनिता बुबालाई फोन गरेको केहि समयमै आ’ त्म’ह’ त्या !
nextन्या’य खोज्न नेपालगञ्ज देखि काठमाडौं सम्म २० दिनको पैदल यात्रा !